Kwethulwe ngokusemthethweni i-Active Fridays | News24
Kwethulwe ngokusemthethweni i-Active Fridays
PHOTO: nokuthula khanyile Izikhulu ebezihambele umcimbi wokubekwa ngokusemthethweni kwe-Active Fridays.
UMNYANGO wezeMidlalo, amaCiko namaSiko KwaZulu Natali uthule ngokusemthethweni uhlelo lokunxenxa abantu ukuthi bazivocavoce ngoLwesihlanu olwedlule olwaziwa nge-Active Friday eWoodburn Stadium.
Ekhuluma kulomcimbi obuhanjelwe abafundi bezikole ezahlekene zaseMgungundlovu kanye nezaguga umeya womasipala woMsunduzi uThemba Njilo uthe kubalulekile ukuthi abantu bazivocavoce uma bezimisele ukuphila isikhathi eside futhi bangahlaselwa yizifo.
“Umzimba ophilayo wenza ingqondo ephilayo. Kufanele abantu bazivocavoce noma ngabe bakuphi nendawo bangaze balinde ukuthi baye ejimini. Nathi lapha eMsunduzi loluhlelo siluqale emavikini amathathu edlule lapha eNatal Cabineers Garden njalo ngoMsombuluko, uLwesithathu kanye noLwesihlanu. Kufanele loluhlelo siluqhube nasemakhaya sikhuthaze nabanye ukuthi bagcine imizimba yabo iphilile,” kusho uNjilo.
UNgqongqoshe walomnyango uBongiwe Sithole-Moloi uthe ngaloluhlelo bafuna ukukhuthaza ukuzivocavoca benze nemidlalo ezobenza baphile.
“NjengeKhabinethi yaKwaZulu Natali sithathe isinqumo sokuthi siqoke usuku lwangoLwesihlanu njengolokukhuthaza abantu ukuthi banyakazise imizimba yabo. Sifuna abasebenzi kuyo yonke iminyango kahulumeni bazi ukuthi uLwesihlanu usuku lokuzivocavoca noma ngabe umuntu uchitha isikhathi esingangehora ejimini.”
USithole-Moloi ukhuthaze abantu ukuthi bazivocavoce futhi badle nokudla okufanelekile.
“Ake siyeke ukudla okunamafutha kakhulu ngoba kuba nomthelela ongemuhle emizimbeni yethu ekuhambeni kwesikhathi. Sigqugquzela nabasemakhaya ukuthi bathathe izinqumo ngezimpilo zabo ezizobenza baphile isikhathi eside. Yingakho Nathi singuhulumeni sithathe isinqumo sokuhlangabezana nomphakathi ngokwakha ama-out door gyms ukuze ukwazi ukugcina imizimba yawo iphilile.”
UNgqongqoshe uthe ukuzivocavoca kwenza intsha ingabi naso isikhathi sokuzibandakanya ezintweni ezizocekela phansi ikusasa layo.
“Sithi intsha ayiyeke ukudla izidakamizwa kodwa ichithe isikhathi sayo ngento ezoyenza ibe ngcono. Nabadala nabo sithi abaphume emakhoneni.”
Intokazi yaseThekwini uSbahle Mpisane odume ngelika ‘Fitness Bunnie’ iyona ebimenywe kulomcimbi ukuba izojimisa abebewuthamele.